ADIS ABABA. Juun 19, 2006. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wafdi la filayo inuu yimaado Soomaalia
ADIS ABABA. Juun 19, 2006.
Publicerat måndag 19 juni 2006 kl 16.03
War laga soo xigtey heyadda wararka ee AFP ayaa shaaca ka qaadey inuu dhowaantan tegi doono Soomaaliya wafdi ka socda ururka midowga Afrika, kaasina oo hordhac u noqon doona sidey uga soo baarandegi lahaayeen ciidamo nabadilaalin ee carrigaasi la geeyo.
Madaxa nabdda iyo nabadgelyada ee ururka Said Djinnit ayaa warkaasi shaaca ka qaadey kadib kulammo uu la yeeshey xubno ka socda qarammada midoobey iyo midowga Yurub.
Xubnaha toddobada ah ee ku jira urur goboleedka IGAD ayey caqabado ka hor yimaadeen sidii ey ciidamo nabadeed ugu diri lahaayeen carrigaasi. Kuwaasina oo la xiriira cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya laga soo bilaabo 1992-gii iyo jawiga cusub ee siyaasadeed ee halkaasi ka dhashey kadib iyada oo gacan kuheyntii caasimadda Muqdisho ey la wareegeen ciidamada maxaakiimta islaamiga.
Ciidamadii ururka maxaakiimta islaamka ee dhowaantan gacan ku heynteeda magaalada Jowhar kaga guuleystey dagaaloogayaashii ayaa maanta u magacaabey raggii hogaamin lahaa maxkamad la sheegey iney halkaasi ka aasaaseen.
Sida la caddeeyey waxaa maamulka carrigaasi lagu dhawaaqey in loo dhiibey sida uu sheegey Shariif Shiikh Axmed oo ah gudoomiyaha maxaakiimta islaamku shiikha magaciisa la yiraahdo Shiikh Cusmaan Maxamed Maxamuu, sida la sheegayana ah nin mayal adag.
Waxaa sidoo kale hogaanka degmadaasi la wadi doona Shiikh Maxamed Shiikh Maxamuud Cabdiraxmaan ahna macallin dugsi quraan iyo wadaadka aan sidaa loo aqoon ee Shiikh Macallin Xassan.
Maalin ka hor intii aan lagu dhawaaqin in goobtaasi lagu dhaqi doono shareecada islaamka ayaa albaabada loo laabey dhammaan shinimooyinkaa lagu daawan jirey aflaanta.